SP-G08 180ml dhoobada alwaax dhogorta dabiiciga ah ee loo yaqaan 'almoheherapy', Shiinaha SP-G08 180ml dhoobada alwaax dhogorta ah ee loo yaqaan 'Soosaarayaasha Soosaarka', Soo-saareyaasha, Warshadaha - Sunpai Industries Limited.
SP-G08 180ml alwaax dhogorta kareemka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee loo yaqaan 'aromatherapy'
49 * 33 * 37 cm / 12 gogo '
Qeybaha 50000 bishiiba
SP-G08 180ml alwaax dhogorta urta ah alwaax dhogorta loogu talagalay aromatherapy
Naqshadeynta Xiisaha Leh --- alwaax dabiici ah iyo dhoobada dhoobada leh oo lagu dhisay waxay jilcisaa iftiinka diiran ee iftiinka leh ee iftiinka; diffaacahan saliida leh ee muhiimka ah wuxuu qurxinta wanaagsan u sameeyaa gurigaaga iyo xafiiskaaga; Kaliya raac laxanka iftiinka iftiinka, si loo yareeyo dareenka xasilloonida, shucuurta xasilloon
Ammaan --- qalabka diffaaca aromatherapy-ga si otomaatig ah ayaa loo xidhayaa marka biyuhu dhammaadaan, oo aan laga walwalayn in la gubo; BPA BILAASH, oo badbaado u ah carruurta, iyo waxyaabaha lidka ka-baxa, si loo hubiyo isticmaalkaaga aaminka ah
Tayada oo la hubo --- Soo-saare leh 14 sano oo waayo-aragnimo leh oo ku takhasustay cilmiga saliidaha iyo hawo-mareenka; Ku qanacsanaantaada ugu badan waxaa damaanad qaaday kooxdayada adeegga fiican
Isticmaalka Saaxiibtinimada leh --- jumladda saliida faafisa ee saliida faafisa oo leh haad iyo goob iftiin si aad ugu raaxeyso dareenka Spa maalin kasta; Waxay abuurtaa baxsiga ugufiican ee xasilloonidaada, cusbooneysiinta udgoonkeeda; Xasilooni iyo isdabamarin joogto ah oo aad ku daboosho baahiyahaaga kala duwan.
Ceramic + Wood + PP
Awoodda is-dejinta marka biyo lahayn
129 * * 129 127mm
Cabbirka sanduuqa midabka
157 * * 157 167mm
12 xabbo / kartoon
NW / kartoon
GW / kartoon
SP-E019 SOICARE baytariyada qalalan waxay ku shaqeeyaan ceeryaamo yar-yar oo aan biyuhu baahin karin
SP-USB04 50ml USB Udgoonka Diffuser Ultrasonic Car Humidifier
SP-WBL06-S galaaska qurxinta guriga caraf udgoon udgoon ah oo gubashada saliida korantada guryaha
Astaamaha SP-G07 ee SOICARE 200ml bambooyinka fiberka alwaax adag ku shaqeeya ee dabiiciga ah